मौसमविद भन्छन् - दशैंमा मौसम कस्ताे रहन्छ भनेर अहिले नै पूर्वानुमान गर्न कठिन ! - Lokpath Lokpath
२०७६, १२ आश्विन आईतवार ०९:५९
मौसमविद भन्छन् – दशैंमा मौसम कस्ताे रहन्छ भनेर अहिले नै पूर्वानुमान गर्न कठिन !
प्रकाशित मिति : २०७६, १२ आश्विन आईतवार ०९:५९
काठमाडौं । सोमबारबाट मौसममा क्रमिक रुपमा सुधार आउने मौसमविदले पूर्वानुमान गरेका छन् । दशैंमा ठूलो पानी पर्छ कि भनेर आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहेको मौसमविदको भनाइ छ । आइतबारको तुलनामा सोमबार मौसममा बढी सुधार देखिने मौसमविदहरुको अनुमान छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सामान्यता तीन दिनको मात्र पूर्वानुमान गर्दछ । त्यसैले खासगरी फूलपातीदेखि दशैंको टीकासम्मको अवधिमा मौसमको अवस्था के हुन्छ भनेर अहिले नै पूर्वानुमान गर्न कठिन हुने मौसमविद बताउँछन् ।
तर, नेपालबाट मनसुन बाहिरीनसकेकाले वर्षाको सम्भावना भने कायमै रहने मौसमविदको भनाइ छ । तर, अहिले भइरहेको जस्तो ठूलो वर्षा वा पूर्ण बदलीको अवस्था भने नहुने अनुमान गरिएको छ ।
आइतबार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर बदली भई हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षा भइरहेको छ । मनसुनी न्यून चापीय रेखा औसत स्थानबाट केहि उत्तर तर्फ सरेको छ। भारतको गुजरात र अरब सागर आसपासमा न्यून चापिय प्रणाली रहेको छ। अर्को न्यून चपीय प्रणाली भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको छ। हाल नेपालमा अरब सागर र बंगालको खाडीबाट आईरहेको जलवास्पयुक्त वायुको प्रभावले मनसुनी गतिविधि केहि सक्रिय रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौं । आगामी बिहीबारदेखि शनिबारसम्म बाढीपहिरोको जोखिम बढ्ने भएको छ । मनसुन न्यूनचापीय
अध्ययनले भन्छ- ‘पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सके लागूऔषध नियन्त्रण हुन्छ’ !
काठमाडौं । सरकारले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सके लागूऔषध नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने